Madaxweynaha Sudan oo laga yaabo inuusan ka qeybgalin shirka IGAD ee Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Sudan oo laga yaabo inuusan ka qeybgalin shirka IGAD ee Muqdisho
Madaxweynaha dalka Sudan Cumar Xasan Albashir ayay u badan tahay inuusan ka soo qeybgalin shirka madaxda wadamada ku bahoobay IGAD ee magaalada Muqdisho kaasoo la filayo in uu toddobaadkan ka dhaco Muqdisho.
Shirkan oo hogaamiyaasha ka soo qeybgalaya ay ka mid yihiin madaxweynaha Rwanda Kegame,Kenyattaha dalka Kenya, Guuleedka Jabuti ayaa ka wadahadli doona sidii la isaga kaashan lahaa amaan darida ka soo cusboonaaneysa wadamada Afrika gaar ahaan argagaxisada.
Sida laga soo xigtey sarkaal ka tirsan dowlada Sudan oo codsaday in aan la magacaabin ayaa sheegay in Bashir oo ay dooneyso maxkamada Caalamiga ah ee ICC ay dhici karto in uu ka baaqsado ka soo qeybgalka shirka maadaama dowlada Maraykanka ay ciidamo ka joogaan dalka Soomaaliya. Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in ku xigeenka Mr Bashir uu ka qeybgali doono shirweynahan.
Dhowr dal oo Afrikaan ah ayaa hore isaga dhega tiray amarada Maxkamada Caalamiga ah ee ah soo xirida Hogaamiyaha dalka Sudan hase yeeshee waxaa laga baqayaa inaysan awood u lahayn
Tan iyo markii la soo saaray xariga ICC safarada uu Madaxweyne Bashir ku tegey ayaa waxaa ka mid ah Sacudi Carabiya iyo Masar.
Wadamada xubnaha ka ah ururka ICC ee uu booqday Madaxweyne Bashir ayaa waxaa kamid ah dalka Koofur Afrika oo uu booqday sanadkii 2013kii.
Dowladda Britain oo sheegtay inay ciidamo cusub u soo direyso Somaliya
Qaramada Midoobay oo shaki gelisay qabsoomida Doorashada Somaliya